Shina HCT-1200-SV LED Placement Machine Fakao mifantina sy mpanamboatra toeran'ny mpamorona | WELDSMT
HCT-1200-SV LED Placement Machine mandeha ho azy sy milina toerana
Milina fanokanana natokana ho an'ny fivoriambe LED 10n taona niainana mpanamboatra!
Tsy toy ny milina fananganana mahazatra izay nalamina tamin'ny fivoriambe LED, ny HCT mandeha sy milina mametraka azy dia amboarina, avelao hanao izay zavatra iray izy - fananganana takelaka LED sy biraon'ny mpamily LED - tena tsara.
Ny fantsona LED, takelaka jiro LED miolakolaka, ny vakan'ny mpamily LED ary na ny takelaka misy tsy mahazatra aza dia azo atambatra haingana, marina ary azo itokisana amin'ny modely rehetra ao amin'ny andian-dahatsoratra HCT mandeha ho azy.
• Fahamarinana ambony: Ny loham-panjakan'ny valo valo dia manana fakantsary fijerena fahitana FLYING ahafahana manome antoka tsara.
• hafainganam-pandeha ambony indrindra: hafainganam-pandeha ambony indrindra mahatratra ny 0,09s / kapila.
• Miaraka amin'ny mpampita serivisy in-SMEMA mifanentana amin'ny automation line.
• Ny loham-panjakanao tsirairay dia manana motera Z-motera manakatona ny tadiny, izay natao ho an'ny mihetsika mitsangana.
• Toerana SMD toerana avy amin'ny 0603 ka hatramin'ny 7474, ao anatin'izany ny mpanohitra, ny capacitor, ny LED avo lenta, ny fenitra ary ny endriny tsy mahazatra.
• Mety ho an'ny vokatra jiro LED rehetra, ao anatin'izany ny T5 / T8, ny fantsom-pivarotana PCB azo tsapain-tànana, ny takelaka jiro LED an'ny boribory ary ny tabilao tsy mitovy endrika. Manangona PCB LED hatramin'ny 1,2 metatra ny halavany amin'ny andalana iray.
• Ny sehatra marbra mavesatra no manohana ny fiainana maharitra.
• Ny fanohanana kalitao kalitao tsara amin'ny alàlan'ny fampiasana marika malaza iraisam-pirenena miantoka ny famerenan'ny fametrahana sy ny fahitsiana.
• Manamora ny famokarana, ny fandidiana mora ary ny fandaharana mora foana ny rindrambaiko mandroso.
Fanitsiana Rafitra fanitsiana vina mihetsika
Isan'ny Biby 8 Spindles x 1 Gantry
Hafainganam-pandeha napetraka Fanitsiana ny fahitana LED 2835 40,000 CPH (Optimum)
Fametrahana fahatsiarovana ± 0.05mm(Miorina amin'ny tsipika mahazatra)
Miendrika mekanika ± 0.02mm
Range Range Fanitsiana ny fahitana 0603 (mirefy) ~ 5050 ~ 7474 (mm),LED avo lenta, IC <10mm
Haavo ambony H = 10mm(afaka mahazaka ny max. 18mm tsy misy fanitsiana ny fahitana)
Board Dimension (mm) Minimum 50 (L) x 50 (W)
Faratampony 1,200 (L) x 380 (W)
PCB Thickness 0.5 - 3.0
Fomba fikarakarana birao Mpanolotsaina ao anaty
Tape Feeder Karazana fiompiana Fiompiana herinaratra
Fahaiza-mitarika 20 (12mm)
tsy voatery 8mm, 12mm, 16mm, 24mm
Utility Power AC 220V / 240V 50 / 60Hz, Dingana tokana
Fampiasana rivotra 0.55-0.7MPa (5.6-7.1kgf / cm2)
Lamesa Eo ho eo. 1680kg
Dimenitra ivelany (mm) 2000 (L) x 1,150 (D) x 1,500 (H)
Manaraka: Rafitra famandrihana roa-ondrana maimaimpoana mitarika fihenam-bidy W-250DS-LF
Desktop Smt Pick Sy Masinina Fametrahana
Diy Smt Pick Ary Masinina Fametrahana
Milina avo ny hafainganam-pandeha LED DOB Assembly Machine LED Chip Mo ...
Lensera haingam-pandeha ambony haingam-pandeha avo lenta mitete HCT-V8 otomatis ...
Fipetraky ny SMT mifangaro sy fametrahana HCT ...
Fandraisana hafainganam-pandeha avo lenta ary alàlan'ny milina HCT-530SV ...